Umculi odumile waseColombia ongumdabu unamakhono amaningi. Ngaphandle kokuthi ungumnikazi wezwi eliyingqayizivele, naye ungumdansa, umdwebo womphakathi, u-philanthropist, imodeli futhi umama omuhle kakhulu. U-Shakira uhlabelela ngezindlela ezihlukahlukene futhi uhle kakhulu. Kusukela ngo-2010, umculi wanquma ukukhombisa elinye ithalenta lakhe futhi wakhulula amanzi okuqala yangasese.
Yini eyamenza ukuba angene esinyathelweni esinjalo ayengaziwa, mhlawumbe, udumo nje wawungeke lufune ukulala ngemuva kwabalingani bakhe futhi lubonise ithalente yokudala flavour engavamile. Kumele kuqashelwe ukuthi amafutha avela ku-Shakira ahlukaniswa izingoma ezihle kakhulu ezimbali nezimbali, egcizelela ikakhulukazi besifazane.
Uhlobo lwamafutha olwenziwa yi-Shakira lunikela?
Iphunga elivela kumculi obizwa ngokuthi "i-Rock!" Ibonisa izici ezithintekayo kakhulu. Njengoba igama liphakamisa, u-Shakira wanquma ukunikezela lamanzi angasese kumculo ohambisa izwe - idwala. Umculi wayefuna ukuthi lephunga lidlulise futhi lijabulele yonke imizwa ejabulisayo yenjabulo, kanye nokulindela akuzwayo ngaphambi kokuya esiteji. Qaphela ukuthi wakwenza. Naphezu kwazo zonke izikhwepha ezingenakunyakaziswa nokuqina, imimoya ayizange ilahlekelwe yimaphi amanothi aqabulayo newakhazimulayo, agcizelela ukukhohlisa, ubufazi kanye nezimfihlakalo. Imimoya yase-Shakira Rock inezinothi ezinjalo:
amanothi angenhla: i-grapefruit, i-bergamot;
Izinhliziyo zenhliziyo: i-jasmin, i-apple ebomvu, ivukile;
Amanothi ayisisekelo: sandalwood, musk.
Enye iphunga elimangalisayo lemilingo elikhishwe ngonyaka ka-2012 ngumnandi ka-Shakira Elixir . Lokhu kuyinkinga yangempela yezifiso kwabesifazane, lapho kukhona khona amaphupho okuthandana kuphela nezwe lapho kutholakala khona iqiniso lamandla omlingo. I-Eau de toilette imane i-hypnotizes ne-bewitches nge-aromas yayo exotic. Iphunga elinjalo alihambisani nesikhathi. Imimoya ka-Shakira Elixir inamanothi alandelayo:
amanothi aphezulu: umbala we-orange;
amanothi enhliziyo: i-peony;
amanothi ayisisekelo: musk.
Amafutha kaPlora Shakir ahlanganisa ukunganaki, ukuthakazelisa, isitayela namandla. Iphunga elinjalo lifanelana kahle nabafazi abaphumelelayo, abazimisele futhi abazimele abazi ukuthi bangaba nomusa, bathandeke futhi baphuphe. Zonke izici ezinjalo zesimo sezinsikazi ezicebile zihanjiswa futhi zivezwe ngendlela engcono kakhulu imimoya yama-pink ka-Shakir. Izingoma ezijabulisayo nezithandekayo zivezwa kumanothi anjalo:
amanothi aphezulu: i-bergamot;
Izinhliziyo zenhliziyo: okusajingijolo, i-sandalwood;
Amanothi ayisisekelo: i-vanilla, i-benzoin.
Izigqoko zasebusika zabesifazane
Ama-baubles ukusuka ebuhlalu
I-Salvatore Ferragamo Emozione
Iiglavu zabesifazane ngaphandle kweminwe
Isitayela seSpain izingubo
Ibhande le-Orthopedic lomgogodla we-lumbosacral
Ukwelashwa komlomo wesibeletho
I-dysplasia yomlomo wesibeletho nokukhulelwa
I-adenocarcinoma ehlukaniswa ngokulinganayo
I-Retinol yesikhumba sombuso
Ukwazi kanjani usuku lokuvuthwa?
Genferon ngesikhathi sokukhulelwa
Ukudla ezimbizeni ngamakhowe
Izinwele ezimfushane ezimfushane 2016
Isihlalo somkhumbi nge-microlift